Gentoo ထည့်သွင်းရန်အဆင့် (၂၀) ​​လမ်းညွှန် | FromLinux | ChrisADR Linux မှ
Gentoo ထည့်သွင်းရန်အဆင့် (၂၀) ​​လမ်းညွှန်
နောက်ဆုံးတော့! ငါတို့ရှိသမျှသည်စောင့်နေကြသည်။ အဆိုပါကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Gentoo Linux installation လမ်းညွှန်ထံမှကိုးကားယူပြီး, ငါ့အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ Gentoo လက်စွဲစာအုပ်။ ငါခြေလှမ်းများကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်ငါရိုးရှင်းတဲ့စောင့်ရှောက်ရန်, ငါ့ဂတိတော်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မနိုင်မီ, ငါရှင်းလင်းချက်နှစ်ခုလုပ်ပေးချင်တယ်။
NVIDIA driver ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီအချို့မှနောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ်ဖိုင်စနစ်များကိုမည်သို့မည်ပုံတပ်ဆင်ရမည်ကိုမပြောချင်ပါ။ ငါအရာအားလုံးကိုရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးအထိထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားမည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်လေ့လာရန်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ခုခုချန်ထားခဲ့ပါ
ငါဒီလမ်းညွှန်စဉ်အတွင်းလုပ်မယ့်လုပ်ကွက်တွေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအကျဉ်းချုပ်သွားမယ်။ ငါ Gentoo ကို usb မှာ screen screen တွေယူဖို့စီစဉ်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသင့် hard drive ထဲမှာပုံတူပွားပြီးငါနဲ့အတူလိုက်လုပ်နိုင်တယ်။ အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းငါလက်စွဲစာအုပ်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသော်လည်း၊ အရာအားလုံးကိုတူညီသောအထုပ်ထဲတွင်အတူတူထားခြင်းဖြင့်ပိုမိုသန့်ရှင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ပါကမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်ကိုသွားဖို့, သူတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှိရလိမ့်မည်။
ဒီ installation အတွက်ငါ SystemD နဲ့ GNOME ကိုသုံးလိမ့်မယ် (GNOME အပိုင်းမှာ KDE အတွက်လိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုရှင်းပြပါမယ်) ။ ဒါပေမယ့် OpenRC စွန့်စားသူတွေအနေနဲ့သူတို့အိမ်စာလုပ်ရမယ်။ System ငါ SystemD ကိုရွေးလိုက်တယ်။ နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသင်သည် Gentoo နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရအဖြစ်အချို့သောအရာတို့ကို configure သည့်အခါသင်ပိုမိုကျွမ်းဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ရဲ့ဖွင့်ကြကုန်အံ့:
2 discs တွေကိုပြင်ဆင်ပါ
3 အဆင့် ၃:
4.1 မတိုင်မီ -
ငါဒီမှာထားခဲ့ပါ လင့်ခ် ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တင်ခဲ့တဲ့တင်ပို့ချက်အရ၊ graphical environment ရှိပြီးသား distro ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုလိုတယ်၊ လက်စွဲစာအုပ်ကိုဤနည်းဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်၊ နေရာတိုင်းမှအရာရာတိုင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာပြန်လုပ်နိုင်သည်။ ငါရေးသားချက်များနှင့်အတူငါ့ပုံမှန်အတိုင်း Gentoo ကနေပြုလိမ့်မည်။
ဤအဆင့်သည်အမြဲတမ်းအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်သင်၏အခန်းကန့်ကိုမည်သို့အဆုံးသတ်စေလိုကြောင်းကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်အချိန်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားမယ်၊ LVM သို့မဟုတ် RAID ကိုသုံးမည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကန့်များ၌ရိုးရှင်းသော ext4 ဖြစ်သည်။ ငါ device ကိုသော usb format လုပ်ပါလိမ့်မယ် / dev / SDBသိသာထင်ရှားတဲ့သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ရှိသည်။
ငါမြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ် fdisk ကိုအသုံးပြုနေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ system အတွက် MBR ကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့်၊ UEFI ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါသင်္ကေတလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်သင်္ကေတ partition ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ် နေအိမ် သူတို့အလွယ်ကူဆုံးခြေလှမ်းကိုလိုက်လျှောက်နိုင်ရုံ။ / boot ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည့်အတိုင်းရိုးရှင်းစွာထားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကို root directory တွင်ထားမည်။ (ကျနော်တို့က 1 command ကိုသွားနေကြသည်)
ကျနော်တို့ disc ကိုရေးသားဖို့ w နှင့်အတူအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအခန်းကန့်များနှင့်သင်တင်လိုက်သောဖိုင်စနစ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးရမည် mkfs ။ ဤကဲ့သို့သောအရာ:
(ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည် command တစ်ခုတည်းအဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်း😉 (ကျွန်ုပ်တို့အဆင့် ၂ ဆင့်သွားသည်) ။
အခုငါတို့ system အသစ်ကို on လုပ်ထားတဲ့ system ထဲမှာ mount လုပ်မယ်။ ဒီအဘို့ငါတို့ tool ကိုအသုံးပြုပါ တောင်ပေါ်မှာ။ (ငါ / mnt / gentoo လမ်းညွှန်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုချန်လှပ်နိုင်တယ်) (အခုအခုအဆင့် ၃ ဆင့်လုပ်ထားတယ်။ )
The stage3 သည်တရားဝင် Gentoo စာမျက်နှာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောတက်ဘလက်ဖြစ်သည်။ သင်က၎င်းကိုသင်၏ browser (သို့) console မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ လက်တွေ့ကျသောအကြောင်းအရင်းများအရကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် download လုပ်ထားပြီးသားကိုသုံးပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ထားသောနေရာတွင်ထားမည်။ စနစ် (/ mnt / gentoo) ။ (ကျနော်တို့အဆင့်လေးဆင့်သွားမယ်)
ငါသာငါဒီမှာဤနေရာတွင်အလေးပေးချင်တယ် ဒေါင်းလုပ်ချ systemd နှင့်အတူတစ် ဦး stage3 ပြီးသားပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် systemd နှင့်ပရိုဖိုင်အတော်များများနှင့်ကြိုတင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်စုစည်းခြင်းအချိန်များစွာကိုသက်သာစေသည်။ ငါရွေးထားသောအချက်အလက်များ၏ gitant စာရင်းပေါ်မလာစေရန် v tar ကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော်သင်ကြည့်လိုလျှင်၎င်းကိုထည့်နိုင်သည်။
unzipping ပြီးနောက်အရာအားလုံးမည်သို့ကြည့်သည်ကိုသင်မြင်လိုလျှင်၊ ls ထဲတွင် ls ကိုသာသုံးရန်လိုသည်။
ကျနော်တို့အဲဒီမှာထက်ဝက်ကျော်ရှိနေပြီ။ အခုငါတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတင်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအတွက်မင်း Gentoo လမ်းညွှန်ကိုဖတ်နိုင်တယ်၊ ငါအနည်းငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်၊ ငါအရင်ကနဲ့ပြီးနောက်ငါပြသမယ်၊ ငါဘယ်လောက်အပြောင်းအလဲလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်တယ်။
သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ သင်ထည့်သွင်းမှုသိပ်မများလှပါ။ ရှာဖွေရန်အခက်ခဲဆုံးမှာ CPU_FLAGS_x86 ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အထွေထွေ အလုပ်လုပ်နေပြီ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လက်စွဲစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ပိုများသည့်လင့်ခ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ကောင်း၏။ The ကြေးမုံစာရင်း ကိုယ့်ကိစ္စတွင်ဒီမှာထားခဲ့ပါ။ သင်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးကိုသာရွေးချယ်ပါ။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းအောင်ထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုပြောင်းလဲရန်မကြိုးစားပါ။
Installation စတင်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်နောက်ထပ်သေးငယ်သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ repository ၏လိပ်စာကိုကူးယူရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ Command ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့သွားမည်။ အဆင့် ၅ ဆင့်၊ ၆ သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ )
Gentoo တွင်မည်သည့် package ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော ebuilds ၏စုဆောင်းမှုဖြစ်သော portage သည် program tree ကို download ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သော configuration ကိုကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအချက်ကြောင့် Gentoo ကို console တွင်စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်သည်
အခုငါတို့ဤ၌ကိုယျ့ကိုယျကိုရှာပါ လက်စွဲစာအုပ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ DNS ကိုကော်ပီကူးကြစို့။ partition ပေါ်ရှိ run နေသော kernel နှင့် Gentoo environment အကြားဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့။ ကျနော်တို့အောက်ပါ command များနှင့်အတူဤလုပ်ဖို့သွားနေကြသည်
သတိပြုသင့်သည်မှာအချို့ဖြန့်ဝေမှုများသည်အပိုစနစ်များအနည်းငယ်ကိုသာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည့်အချိန်များသည် သူတို့မှာအခက်အခဲရှိရင်လက်စွဲစာအုပ်ကလုပ်နိုင်တယ်။ ) ။ (ငါတို့လို ... command line ၁၂ ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆင့် ၇ ဖြစ်မယ်)
ယခုငါတို့ Gentoo အသစ်ကိုသွားတော့မည်။ ဤအရပ်မှ console ဖြင့် operating system အသစ်ကိုလည်ပတ်နေသည်
နောက်ဆုံး command သည် optional ဖြစ်သည်။ Terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသည်ဟုပြောရုံသာဖြစ်သည် ချစ်တယ် ပိုကောင်းတဲ့ဂုဏ်ထူးအတွက်နာမည်ပြောင်းခြင်း🙂 (ငါတို့က ၈ နှစ်သွားပြီ)
Gentoo အသစ်မှာပထမဆုံးလုပ်ရမှာက repository ကို update လုပ်ရမယ်။ ဒါကို command နဲ့လုပ်နိုင်တယ် ပေါ်လစီ -brbrync ။ အချို့သောသတိပေးချက်များပေါ်လာခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကမတည်ရှိခဲ့သောဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲများကိုဖန်တီးနေသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီအသေးစိတ်အနည်းငယ်ကိုပြင်ဆင်တော့မည် (ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့ချက်ချင်းလုပ်ရသည်ကိုရှင်းပြပါမည်) ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ make.conf အကြောင်းကျွန်ုပ်၏ post ကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည် profiles များ၌ကျန်ခဲ့သည့်အပိုအနည်းငယ်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သော desktop ကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ၊ ပထမကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ပရိုဖိုင်တွင်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ နှင့်အတူ ရွေးပါ:
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် amd64 နှင့် systemd ပရိုဖိုင်းရှိသည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်) စင်ကာပူ တရားဝင် download စာမျက်နှာပေါ်တွင်) ။ ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုရွေးရန်နံပါတ် (သို့) အမည်ကိုသုံးနိုင်လျှင် gnome ကို systemd ဖြင့်ထည့်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ kde ကိုလိုချင်လျှင်ပလာစမာကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ (သင်အခြားတစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်၊ systemd ပရိုဖိုင်းဖြင့်သင်ထားခဲ့နိုင်သည်။ (ဤအဆင့်သည်အဆင့် ၁၀ 😉)
ကြယ်ပွင့် (*) ရွေးချယ်ထားသောပရိုဖိုင်းကိုဖော်ပြသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်စေရန်အထောက်အကူပြုမည့်ပရိုဂရမ်အနည်းငယ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲတော့မည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀ close နီးသော အချိန်မှစ၍ ဂဏန်းများကိုသိမ်းဆည်းရန် command တစ်ခုတည်း၌ကျွန်ုပ်ရေးသည်။ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့သူတို့အားလုံးရှင်းပြပါမည်။
ကောင်းပြီ၊ ဤသူသည်ငါတပ်ဆင်သောပရိုဂရမ်များစာရင်း (၎င်း၏မှီခိုမှုများကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစာရင်းသည်ပိုကြီးသည်):
gentoo-sources: ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုနောက်အဆင့်တွင် kernel ကိုထည့်သွင်းရန်သတ်မှတ်သည်။
linux-firmware - ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးအတွက်လိုအပ်သောယာဉ်မောင်းများစွာ (ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်ဒရိုင်ဘာသည်ဤစာရင်းတွင်ဖြစ်သည်)
genkernel-next - kernel compilation ဖြစ်စဉ်နှင့် initramfs ဖန်တီးမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောကိရိယာတစ်ခု (ဤစာမူမှလွတ်မြောက်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း systemd ကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်)
gentoolkit - စနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုကိုခွင့်ပြုသည့် Gentoo ကိရိယာများတစ်စုံ။
grub: ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည် Boot manager ။
vim: nano ထက်သာတာကိုသဘောကျတယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ comes) ။
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပရိုဆက်ဆာ၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်။ ဤအချိန်ကိုနောက်အဆင့်များအတွက်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ယူပါ။ (ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၁ နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အနည်းငယ်ကျန်တော့သည်။ )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဇုန်ကိုထုတ်လုပ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံစံ zoneinfo / တွင်လာသည်။ / ။ သင်၏မြို့နှင့်ဒေသကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါက၊ ls လမ်းညွှန်ရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝုဏ်အတွင်းထုတ်လုပ်။ Gentoo သည်ပုံမှန်အားဖြင့် local အနည်းငယ်သာပါရှိသည်။ ၎င်းသည် UTF-8 ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည်မှာတိုင်းပြည်မှစာရင်းတစ်ခုကိုစာရင်းထဲသို့ထည့်ပြီးစာရင်းတွင်ပါသောအရာအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိစ္စတွင်ငါတစ်ခုသာထားခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်၍ သင်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ host name ကိုထည့်ပါ၊ မည်သည့်အမည်မဆိုဤအချက်၌လုံလောက်သည်
တောင်းဆိုမှုများအရှိဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယခု ၁၂ ဆင့်ကိုသွားရန်ကျန်ရှိနေသည်။
ယခုဖိုင်ကိုထုတ်လုပ်မည် fstab၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမသိသောသူများအတွက်၊ ထို့နောက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖတ်ရန် you သို့သော်အထွေထွေစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန်အတွက်၎င်းသည်စနစ်စတင်ခြင်း၏အခိုက်အတန့်၌မဟာဗျူဟာအချက်များတွင်အခန်းကန့်များအားလုံးကိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဖိုင်ဖြစ်သည်။ စနစ်။ ယခုငါတို့ partitions ၏တန်ဖိုးများနှင့်အတူစွန့်ခွာသွားနေကြသည်။
ကျနော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းငါ Gentoo နေရာချထားတဲ့ discs တွေကိုငါချလိုက်တယ်။ သင်သည်အခြားအမည်များကိုသုံးကောင်းသုံးလိမ့်မည် (sda) နှင့်သူတို့လိုချင်သောရွေးချယ်စရာနှင့်အမျိုးအစားအရေအတွက်။ (အဆင့် ၁၃)
ယခုကျွန်ုပ်တို့ root user ၏စကားဝှက်ကိုထည့်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူကိုဖန်တီးရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့နောက်မှလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏လမ်းညွှန်ကိုတပ်ဆင်ရန်သတိရပါ နေအိမ် သက်ဆိုင်ရာ partition ကိုအတူ။ (ဒီအဆင့်တွေကိုနံပါတ် ၁၄ လို့ရေတွက်နိုင်တယ်)
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုသော့ကိုထည့်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုလုံခြုံစွာလုံခြုံစွာထားရန်မမေ့ပါနှင့် အဖြစ်ကောင်းစွာအမြစ်နှင့်အခြားသူများ။ ????
ကျွန်ုပ်တို့၏ kernel သည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ဖတ်ရှုခြင်းအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအပိုင်းအနည်းငယ်၏ဖန်သားပြင်အချို့ကိုငါယူမည်။ ရှေ့ဆက်သွားရအောင်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် systemd အတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်လိုအပ်သော configuration process ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်နိုင်ပါသည်။
လမ်းကြောင်းထိပ်သည် (ဒုတိယအပြာရောင်လိုင်း) တွင်ပေါ်နေသည်ကိုသတိရပါ။ init system နှစ်ခုလုံးကိုမဖြစ်မနေထားရန်လိုအပ်သည် ဒါကြောင့်ပုံရသည် [*].
Wifi နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ modules အချို့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ငါတို့အားလုံး wifi ကိုသုံးတာပဲ cfg80211, mac80211.
သင်မြင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏ Wi-Fi ကွန်ယက်ကဒ်သည် Intel ဖြစ်သည်။ ကျန်အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏လက်ရှိလက်ပ်တော့တွင်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်းတို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ကိုအသုံးပြုရမည်။ ဆိုတာသတိရပါ lspci နှင့် lsusb သင်၏မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်😉
ပြင်ဆင်မှုပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်ကိုပုံမှန်အမည်ဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီးမီနူးမှထွက်ပါ။ ယခု၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ kernel ကိုစတင်စတင်သည်။ ၎င်း၏ modules များနှင့် initramfs များကို systemd နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ရန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
ပြီးတာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီး၊ အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်စုဆောင်းမှုအဆုံးမှာသတိပေးချက်တစ်ခုပေါ်လာရင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ UPPER CASE ဖြင့်ပေါ်လာသည့်ရွေးချယ်မှုများကိုသာရှာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။/»ထိုအခါတန်ဖိုးများကိုအကြံပြုသောသူတို့အားပြောင်းလဲပါ။ (ဒါကငါတို့ခြေလှမ်း ၁၅)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ kernel အသစ်ကို install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူက system ကို run ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာ grub ကိုပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်သေးတယ် သတိပေးချက်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည် ext2 မှလွဲ၍ အခြားဖိုင်စနစ်တစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကနောက်ထပ်အသေးစိတ်တစ်ခုကမထည့်သွင်းခင်ကျွန်တော်တို့ grub ထဲမှာ configure လုပ်ထားတယ်။ ဖိုင်ထဲမှာ / etc / default အ / GRUB ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည်။
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်စတင်သောအခါအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်ထားရန် grub ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ext4 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြစ်မှာ ( / ) နှင့် OpenRC အစား systemd နှင့်အတူစတင်ရှိသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် grub ကို disk can (ယခုအချိန်အထိအဆင့် ၁၆ နှင့် ၁၇) ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အခုစနစ်ကိုလုံးဝမွမ်းမံတော့မည်။ ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည့်အရေအတွက်အပေါ်မူတည်ပြီးဤရွေးချယ်မှုသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ လိုပဲ စင်ကာပူ အခါအားလျော်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းခံရသည်၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအမိန့်များကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်အသင်း၏ကျန်အဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် package အနည်းငယ်ကိုအသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည် (ဖြစ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သင့်သည်) ဖတ်ပါ လူထွက်လာ copy ကော်ပီကူးရန်နှင့်ကူးရန်ဝါသနာပါသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စွန့်ခွာမည်ဟုသင်ထင်သလား။ 🙂
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းတိုင်ရောက်လုနီးပြီ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာလိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူ gnome ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် plasma ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ညအချိန်တွင်စက်ကိုချန်ထားရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သို့မှသာသူတို့နိုးသောအခါသူတို့၏စနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Step (အဆင့်… ၁၈ ပြီးခဲ့သောယခင်နှင့်ယခု ၁၉)
ယခုငါ 100% ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသောအမှားများကိုပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိထက်ပိုသောအရာဖြစ်စဉ်ကိုလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ package set ကတော်တော်ကြီးများနေလို့ USE flags နဲ့ပconflictsိပက္ခတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာပြမယ်။
ဒီ command နဲ့ ပေါ်ထွက်လာ -av မှီခိုမှုအားလုံးကိုတွက်ချက်ရန် portage ကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဤကဲ့သို့သောအရာမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
ငါတို့တွန်းတယ် အဘယ်သူမျှမ။ ရုံဖြစ်ပျက်၏စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်။ ငါတို့မှာaစင်ကာပူ ကွဲပြားခြားနားသော USE အလံနှင့်အတူပြုစုလာ, သတိရ? ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဖိုင်းကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုပါကပုံမှန်အားဖြင့်ရောက်ရှိလာသော USE အလံများကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ။ ယခုမှာ portage က USE အလံများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောနေသည်။ ကျွန်ုပ်တောင်းခဲ့သောပရိုဂရမ်များစာရင်းပြုစုရန် (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် gnome) လိုအပ်သည်။
ဒီပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဖိုင်တွဲထဲမှာပရိုဂရမ်ရဲ့အမည် (နောက်မှအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ဖို့) နဲ့ဖိုင်တခုကိုငါတို့ဖန်တီးတော့မယ်။ /etc/portage/package.use။ (အကယ်၍ ဖိုင်တွဲမရှိပါကအမည်အတိအကျဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်)
ဤအရာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တွင်ထပ်မံကြိုးစားရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ သို့သော်၎င်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်အစီအစဉ်၏ယေဘူယျအမည်ကိုအစတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်၊ USE အလံများအပြီးတွင်၎င်းတို့သည် ၁ (သို့) ထိုထက်မကရှိနိုင်သည်။ front က # ကိုဘယ်လို disable လုပ်မလဲ၊ # နဲ့စတဲ့မည်သည့် line ကိုမဆို portage မှလျစ်လျူရှုထားသည်။ ရိုးရိုးမှန်လား 🙂ဤသည် Gentoo စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၏မှော်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် portage နဲ့အလုပ်ကိုအခြားရာထူးအတွက်ထားခဲ့တော့ဒီဟာအတော်လေးကြာနေပြီ။ quite (အဆင့် ၂၀၊ ပြeshနာဖြေရှင်းခြင်း)
install command ကိုထပ်ကြိုးစားကြည့်ကြစို့။
ထင်ရှားသည့်အချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့် ၂၀ ကိုကောင်းစွာမပြီးဆုံးနိုင်သေးပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ရှင်းပြရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်မြင်ယူဆရသောအမှားအယွင်းသစ် ၂ ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
အ သော့ချက် ပရိုဂရမ်တစ်ခုသည်မည်သည့်ဗိသုကာနှင့်မည်သည့်အဆင့်တွင်ထောက်ပံ့သည်ကိုညွှန်ပြသောတံဆိပ်များဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ "~ amd64″ amd64 ၏ "မတည်ငြိမ်သော" ဌာနခွဲဖြစ်ပါတယ်။ OpenSSL သည်ရံဖန်ရံခါ update (အမြဲတမ်း update လုပ်ရန်နှင့်ပြproblemsနာများကင်းစွာထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်) နှင့်အမြဲတမ်းပါ ၀ င်သည့် program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် "တည်ငြိမ်မှုမရှိသော" ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ ပုံမှန်အားဖြင့်လက်တော့ပ်ပရိုဖိုင်းများကိုပံ့ပိုးသည်«amd64 "သို့မဟုတ်" x86«။ ၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်သင် variable ကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည် ACCEPT_KEYWORDS = » ~ amd64″ / » ~ x86″ make.conf အတွင်းပိုင်း (ငါ post ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားမည်ဆိုပါက၎င်းထက်မပိုပါ)
ယခုငါတို့အဘို့, ယခင်ခြေလှမ်း၌ရှိသကဲ့သို့, ဖိုင်တွဲကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည် package.accept_သော့ချက်စာလုံးများ en / etc / portage ထပ်တူပုံစံကိုထည့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့် KEYWORD variable နှင့်အတူ။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည် အထွေထွေ 😉ယခုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးပြproblemနာ…အပြောင်းအလဲများကိုဖြေရှင်းတော့မည်ဖြစ်သည် မျက်နှာဖုံး။ အကယ်၍ သင်သည်နည်းနည်းသတိရှိသူဖြစ်လျှင်ပုံတွင်ကျွန်ုပ်ပြသထားသောအရာကိုတွေ့မြင်ရပြီး၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းကြောင်းသတိပြုမိသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာဤဖိုင်တွင်ရေးသားရန်လိုအပ်သည် အတိအလင်း ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ့်ဗားရှင်း။ အပေါ်ကပုံသည် optional ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်«> = type / package-version ဖြင့်စနိုင်သည် »၎င်းဗားရှင်းမှပြောင်းလဲမှုများကိုလျှောက်ထားရန် portage အားပြောရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ insalation command ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးကြပါစို့
ကျွန်ုပ် install လုပ်သောအခါအမှားအယွင်းများစွာကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မျှမရသော်လည်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ hahaha's ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ဒီမှာ portage ကကျွန်တော့်မှာပရိုဂရမ်မျိုးစုံရှိတယ်၊ သူတို့ပhaveိပက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောနေတယ် မင်္ဂလာပါ? ကျနော်တို့မကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်များ၏ကျန်နှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သင်၏ command တစ်ခုကိုသုံးမည် ပြဇာတ် နည်းနည်းပိုကောင်းတာပေါ့။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင် SLOT0ဖွင့်ထားသည့် openssl ဗားရှင်းတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် [M] ပါသော SLOT0/ 1.1 ... ကို the / ဖော်ပြသည်။ နှစ်ခုအတူတူမဟုတ်ဘူး။
ပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအဆင့်မြှင့်တော့မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူ update လုပ်နိုင်ဖို့ SLOT0ကိုအရင်ဖယ်ရအောင်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ စနစ်အတွင်း၌စာကြည့်တိုက်တစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် executable ကိုဖျက်လိုက်ခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်များကိုဖျက်သိမ်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား command တစ်ခုကိုလည်းအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ gnome ကိုထပ်ကြိုးစားကြည့်ကြစို့
အားလုံးအဆင်သင့့်! တပ်ဆင်စဉ်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပြproblemsနာများကိုမတော်တဆကျွန်ုပ်တို့လည်း we ဖုံးအုပ်ထားသည်
ယခုငါတို့တစ်ညလုံးတပ်ဆင်ထားမည်။ သင်မြင်နိုင်သည်မှာ 1 Gb downloads နီးပါးရှိသည်
Grub တပ်ဆင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် grub-install / dev /
၄ င်းတို့အနေဖြင့်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ကိရိယာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည်ကိုသာဖော်ပြသင့်သည် အခန်းကန့်မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းကိုအခန်းကန့်၌ထားခြင်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘာမျှအလုပ်မဖြစ်စေနိုင်သည်။ တခြားနေရာများကဲ့သို့သင် download လုပ်နိုင်သည် os-prober အခြား disk များတွင် operating systems များကိုရှာဖွေရန်။ ငါပြသသည့် command တွင်အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို USB ပေါ်တွင် သုံး၍ hard drive တွင်ရှိသင့်သော်လည်းသင်အမှားအယွင်းများမတွေ့ရှိရပါ။
အခုမကြာသေးခင်ကမှ grub setup ခြေလှမ်းကိုသတိရ? ကောင်းပြီအခုတော့သူကငါတို့ကိုကူညီဖို့လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ grub configuration ကိုပြုလုပ်ရန် ၄ င်းသည် systemd ဖြင့် boot လုပ်ပြီး ext4 ကို root partition အဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
D ပြီးပြီယခုကျွန်ုပ်တို့ grub ကိုပြုပြင်ပြီးစက်ပစ္စည်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်သောအခါစတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ (အဆင့် ၂၁ ကိုပြီးသွားပြီ)
နောက်ဆုံးတစ်ခုကအသေးစိတ်ပဲ။ visual နောက်လာမည့်အချိန်တွင်အမြင်အာရုံကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ရှိရန် NetworkManager ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးကိုရောက်ပြီ။ ငါဟာအဆင့်တစ်ဆင့်ပဲသွားခဲ့တယ်။ အကယ်လို့သင်ဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ driver hardware မရှိရင်၊ လက်စွဲစာအုပ်နဲ့ဒီလက်ကိုလိုက်ပြီး၊ ပြproblemsနာတွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါ step လမ်း…ဂုဏ်ယူပါတယ် သင်သည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးတွင် Gentoo တပ်ဆင်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသောအခွင့်ထူးခံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
ယခုငါရေးလိုက်သောအရာသည်အလွန်များနေသည်။ နောက်လာမည့်သင်ခန်းစာ၏နောက်ကျောစာစောင်များတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟူသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစတင်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ဤတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ me ငါနှင့်အတူလာမည့်အချိန်အထိဖြစ်လိမ့်မည် Gentoo နှင့်၎င်းင်း၏စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများအကြောင်းသင်ပိုမိုနှစ်သက်ရန်ကူညီသည့်အခြားစာမူတစ်ခုနှင့်အတူ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါအကြောင်းကိုငါအသည်းအသန်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခြားခေါင်းစဉ်ရေးသားခြင်းစတင်ပါလိမ့်မည် - Git နှင့် Kernel ကိုငါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းများဖြစ်ကြောင်း (အခြားသူများလည်းရှိပါတယ်) သို့မဟုတ်ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, ငါအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြနိုင် လုပ်ငန်းစဉ်🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Gentoo ထည့်သွင်းရန်အဆင့် (၂၀) ​​လမ်းညွှန်
Abel Sendon ။ ဟုသူကပြောသည်
ငါမကြာသေးမီက VM ပေါ်တွင် Gentoo ကို install လုပ်ပြီးမှတ်စုစာအုပ်တွင်“ မြန်ဆန်သော” လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်အဆင့် ၂၆ ခုရှိသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် Debian တွင်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးရှိပါက၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုစမ်းသပ်နေသည်။ အရာအားလုံးအဆင်မပြေလျှင်၊ ငါမှတ်စုစာအုပ်ကိုဆွဲ ယူ၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းမည်။
PS: ခက်ခဲမှုအတွက်နာမည်ကောင်းရသော်လည်း Debian2နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲသူတို့ပြောခဲ့တာကိုတွေ့ရသည်။
Abel Sendon အားပြန်ပြောပါ။
Great Abel - ဒါကကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲ
သင်မှန်ပါသည်၊ ၎င်းသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖန်တီးထားသောကျော်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်မကြာသေးမီက Linux အသုံးပြုသူများအတွက်သဘာဝဖြစ်သော်လည်းအချိန်ကုန်ခံခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သိချင်စိတ်၏အနှစ်သာရကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ Gentoo သည် Linux ၏အနှစ်သာရကိုဖုံးကွယ်ရန်မကြိုးစားပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် - အခြားနေရာတွင်ရှိသောရူပါရုံမှထွက်ပေါ်လာသောအရာများစွာကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်သင့်ကိုစွဲလမ်းစေသည်။ မင်္ဂလာပါ
ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာကောင်း၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Ubuntu ကိုငါ uninstall လုပ်ပြီးကတည်းကအဲ့ဒီ့ခဏလေးကြာပြီးတဲ့နောက်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဒါကငါ့ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ Debian ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ငါ Gnome ကဘာကြောင့်မယုံကြည်တာလဲငါမသိသေးဘူး၊ မျက်နှာပြင်ကြောင့် Unity ကိုငါအရမ်းအသုံးခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ ဒါကဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံရှိမယ်သေချာတယ်😉ကံကောင်းပါစေ။ ခင်ဗျား Gentoo ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်😀လေးစားစွာဖြင့်
xorg-server ကို install လုပ်ပြီး gnome မတိုင်မီတစ်ခုခုကို configure လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါဖာနန် you တကယ်လို့သင် gnome သို့မဟုတ် plasma စတဲ့ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသွားရန်မလိုပါ။ သင်၏ VIDEO_CARD ကို make.conf တွင်ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ပြီးပါက portage သည် GNOME သို့မဟုတ် PLASMA သို့သင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုပြသနာမရှိဘဲတပ်ဆင်ရန်ဂရုစိုက်ပါသည်။ ။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်၊ သင်သည်သင်၏ desktop ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲလိုပါကအခြားဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့အခြားတစ်ခုကိုရွေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် X ကိုခြစ်ရာမှထိုအရာကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်😉
ကြီးမားသောစားပွဲခုံများ၌လည်းမည်သူမျှ desktop အပြည့်ကိုအသုံးမပြုသောကြောင့် gnome တွင်ကျွန်ုပ်၏ distro မှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအရာများ၊ manjaro၊ အပို gnome အများစုကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ gentoo တွင် gnome-light ကိုတပ်ဆင်ရမည်၊ အရာဝတ္ထုအားလုံးနီးပါးစုစည်းထားသည့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းထက်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။
gentoo တွင်အမြန်နှုန်းကွာခြားချက်ကိုစွမ်းအားကြီးသောကွန်ပျူတာများတွင်ပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မည်၊ 2-core ကွန်ပျူတာ၌သူတို့သည်လျင်မြန်သော debian နှင့်အတူတူအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်အင်အားကြီးသောကွန်ပျူတာများမဟုတ်ဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူကွန်ပျူတာများတွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလိမ့်မည်ဆိုပါက binary distribution များသည်ကွန်ပျူတာများအတွက်အားနည်းသည်။
ကောင်းပြီ၊ အမှန်🙂 GNOME ကိုယ်တိုင်ကအလွန်လေးလံသည်၊ သို့သော်အချို့ဆောင်းပါးများကိုသင်လိုက်နာခဲ့လျှင် gnome ကိုယ်တိုင်တွင် USE အလံများစုဆောင်းထားခြင်းကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ပြီးအချို့သောအရာများရေးသားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဥပမာ gnome base တွင်ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်တွင်ဂိမ်းများ၊ မှတ်စုများနှင့်ကျွန်ုပ်မသုံးသောအရာများမပါရှိပါ။ n gnome-extra လည်း၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အပိုပစ္စည်းများပါရှိသည်။ 🙂 (gnome-light အရာသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုးကားချက်ကိုရှာမရလို့ပါ။ ) ဟုတ်ပါတယ်၊ GNOME OpenRC မှာ ၁၀၀% မရရှိနိုင်တာကြောင့် SystemD အပေါ်မှီခိုမှုတွေရှိနေတယ်၊ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ခြင်းသည်အနည်းဆုံးလေးလံသည့်လိုအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများထက်လွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်၎င်းကိုအခြားပို့စ်တွင်ထားခဲ့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးမပြုသည်ကိုစမ်းသပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ရလျှင် I'll
ကောင်းပြီ၊ ဒေတာကိုကျွန်ုပ်အတည်မပြုနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ရန်လုံလောက်သောအရွယ်ရှိကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စုစည်းရန်အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းကို VM (kernel တစ်ခုတည်းဖြင့်ရရှိနိုင်) ချိန်တွင်အချိန်သိပ်မများလှပါ။ ၎င်းသည် -j9 ထက်ပိုမိုပါသည်။ ညတွင်အလုပ်လုပ်နေလျှင်သင်ပျင်းရန်သေခြင်းမဟုတ်ပါ။ 🙂
John နည်းနည်းဘလူး ဟုသူကပြောသည်
အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်မှီခိုမှုပြgentနာနှင့်အတူ gentoo သည်မည်မျှတည်ငြိမ်သည်။ ငါ့မှာ dual-core laptop ဟောင်းတစ်လုံးရှိတယ် အသံထုတ်လုပ်မှုပရိုဂရမ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် gentoo ကိုတပ်ဆင်ရန်ကောင်းသည်။
ကောင်းပြီ၊ Gentoo ဟာမင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းတည်ငြိမ်နေတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲစနစ်ကိုလည်ပတ်နေသူများကိုကျွန်ုပ်သိသည်၊ ၎င်းသည်ပထမနေ့ကဲ့သို့အတိအကျအလုပ်လုပ်သည်။ ၂ နာရီတိုင်းမွမ်းမံသည့်အခြားသူများလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နေကြသည်။ သင်ပြသသည့်အခါသင်အကြိုက်ဆုံးပြသမှုကိုရှာဖွေနိုင်သည် https://packages.gentoo.org/ ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီဟာနဲ့သင်ပိုကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်ကိုရနိုင်တယ်။
Gnome-light သည် portage တွင်တည်ရှိပြီး၊ ငါ sabayon ရှိသည့် virtual machine တွင်၎င်းကိုစစ်ဆေးသည်။ entrophy အပြင် portage လည်းရှိသည်။
funtoo မှာ openRC နဲ့ gnome ရှိတယ်။ ဒီ distro မှာ systemd မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအရင် version တွေမှာတော့ openRC နဲ့ gnome overlays တွေရှိတယ်၊ ငါထင်တာက dentrell overlay, ငါ gentoo wiki မှာတွေ့ပြီ။
ဟင်ဖာနန်၊ ငါမင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီ gnome-light အတွက် ebuild သည် meta-package တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပြောသည့်အတိုင်းသင်သည်ထိုသေးငယ်သော GNOME ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် systemd ပါသောဗားရှင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ OpenRC လိုက်ဖက်တဲ့ဗားရှင်းဟာ GNOME2ကိုအခြေခံထားတယ်၊ GNOME3လိုခေတ်မမီဘူး၊ သယ်ဆောင်စရာမလိုပဲ portage မှာလည်းရရှိနိုင်တယ်။ ပို့စ်များတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်ထံပေးပို့နိုင်သည့်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်
Basilio hernandez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါအဲဒီမှာရောက်သည်အထိ grub ထည့်သွင်းလို့မရဘူး, ငါ uefi နှင့်အတူအသက်ရှင်စတင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ???
မှတ်ပါ။ efi လမ်းညွှန် nimodo ကို 00000 မှမနက်ဖြန်မှ စတင်၍ မရပါ
Basilio Hernandez အားစာပြန်ပါ
အရာအားလုံးကိုအစမှစတင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမထင်ပါ၊ သင့် / boot သည်ဖိုင်စနစ်အပြည့်ရှိသဖြင့်ထိုအချိန်တွင်သင်စတင်နိုင်သည်။
သင်ဒီသိချင်စိတ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ gre ၏ဖန်သားပြင်မှန်ဘီလူးသည် libreoffice၊ အဓိကအားဖြင့် Writer ရှိ cursor ကိုမည်သည့်အထုပ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေသနည်း။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်အာရုံပြtoနာကြောင့် gnome ကို screen magnifier ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ libreoffice ဗားရှင်း ၅.၁ ကတည်းက manjaro တွင်သုံးစွဲမှုတိုးတက်လာသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ magnifier သည်အရာရာကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်စာရေးသူတွင်စာရေးခဲ့လျှင် cursor tracking မရှိပါ။ libreoffice ဗားရှင်း ၅.၁ တွင် cursor ကိုရိုက်ခြင်းဖြင့်သင် mouse ကိုရွှေ့စရာမလိုဘဲသင်ရေးသားနေသည့်နေရာကိုဖြတ်သွားသည်။ ငါဥပမာ debian 5.1 gnome ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် live session တွင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးစာရေးသူတွင် expander သည် cursor ကိုလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် personal folder ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ဤအကူအညီကိုပေးသော package များ၊ Debian သစ်ကြံပိုးခေါက်တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်။ expander ဒါပေမယ့် libreoffice ထဲမှာ cursor ကိုမလိုက်နာဘူး။ ဒါကြောင့် gnome တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ sabayon gnome ကိုကြိုးစားပြီး gentoo ပေမယ့် binary ကလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် cursor tracking မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုပျောက်နေတယ်ဆိုတာနားလည်တယ်၊ ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါ libreoffice ကိုမသုံးဘူး၊ ဒါပေမဲ့မေးခွန်းကောင်းတခုကမင်းမင်းသွားရမယ်လို့ထင်တယ်
Universal Access> magnification> နှင့် magnifier ၏နေရာတွင် mouse ကို အသုံးပြု၍ cursor ကိုရွေးပါ။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ Evolution တွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ စာသားနှင့်အတူရွေ့လျားနေသည့်ဖန်သားပြင်ကိုရေးနေစဉ်၊ အကယ်၍ "မျက်နှာပြင်၏အပိုင်း" option ကိုတက်ကြွနေလျှင်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကြိုးပမ်းမှု ၅ ခုပြီးနောက် gentoo ကို install လုပ်ခြင်း၊ ငါ partitions နဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းပိုပြီးနားလည်ခဲ့တယ်။ ငါ့မှာ hard drive ရှိတယ်၊ gentoo အလုပ်လုပ်ရအောင်ကောင်းတယ်၊ ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ စုစည်းမှုကဒီလောက်မရှည်ဘူး၊ အရာကအဲဒါကို bits နဲ့တပ်ဆင်ရမယ်။ genkernel ကိုအသုံးမပြုဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဗေဒအဆင့်မှာငါမလုပ်ဘူး။ Guts တွေကိုကြည့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ generic kernel ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စုစည်းလိုက်ပြီ။ အခုငါဖမ်းမိနေတယ် "external / memory / mount / dev / snt * / mnt" လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်ပအမှတ်တရများကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်း၌ဖြစ်သည်။ ဖိုင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်အခြားအရာများအမြဲတမ်းကင်းမဲ့နေခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားလူတို့အားအရင်းအမြစ်များမှအချိန်များစွာစုဆောင်းခြင်းထက်ပိုမိုရိုးရှင်းသောအရာနှင့်သာသုံးစွဲရန်သင်ကြားရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်
ဒီ post မှာ၎င်း၏အချိန်ရှိသော်လည်းရည်ညွှန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ယခုငါ Linux အသုံးပြုသူတစ် ဦး ပါ။ ငါတောင်မှတ်မိတာမပါဘူး၊ ငါ Slackware ကနေစပြီး SuSE, Debian နဲ့ Arch ကို ၅ နှစ် ၆ နှစ်လောက်ပြောင်းခဲ့တယ်။ (ငါပြောတာက Linux နဲ့အတူ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တယ်" ဆိုတာမင်းရှင်းနေလို့ပါ)
Gentoo ကိုအမြဲတမ်းစွဲဆောင်တတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာအချိန်မရှိဘူး၊ ငါနဲ့အတူပိုပြီး "ပျင်းရိ" လာတာနဲ့အမျှအဲဒါကို install လုပ်ဖို့အလေးအနက်စဉ်းစားမထားဘူး။ ငါ Archp နှင့်အတူ Thinkpad T420 ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ဒုတိယ laptop တစ်လုံးဖြစ်သော T440p ကိုဝယ်ယူလိုက်သည်၊ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့၊ ငါ Gentoo ကို install တော့မည်။
ဒီ "တိုတောင်းသော" နိဒါန်းပြီးနောက်, ငါ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, အဘယ်မှာငါ့လက်ပ်တော့များအတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်အလံဖိုင်များနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ရဖို့?
ငါ i3wm မရှိ Gnome မရှိ Kde မရှိအခြား DE နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။ ရှာဖွေရန် ပို၍ ခက်ခဲသောအချက်မှာစနစ်နှင့် kernel ကိုမည်သို့ညှိရန်ဖြစ်သည်။
ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Gentoo ကို T440p တွင်တပ်ဆင်ရာ၌အောင်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။
Github ပေါ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး PR (Pest Request)
JLCPCB ဖြင့်ဒေါ်လာ ၂ ဖြင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ်များကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။